डिस होम बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता २०७८ मा भाग लिने कि ? – Pahilo Page
३२ श्रावण २०७८, सोमबार २१:२३ 1161 पटक हेरिएको
काठमाडौं । बाह्रखरी बुक्सले “बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता २०७८”को तेस्रो संस्करणको घोषणा गरेको छ । प्रतियोगितामा प्रथमलाई १ लाख, द्वितीयलाई ६० हजार र तृतीयलाई ४० हजार पुरस्कार दिइने भएको छ । पुरस्कारको विस्तृत विवरण तल दिइएको छ ।
डिस होम ‘बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता–२०७८’
नेपाली आख्यान प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्न १२खरी बुक्सले ‘बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता–२०७८’ (तेस्रो संस्करण) घोषणा गरेको छ । प्रतियोगितामा संसारभर रहेका नेपाली कथा लेखकलाई भाग लिन आह्वान गरिएको छ ।
प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट तीन कथालाई अघिल्ला वर्षमा जस्तै प्रथम हुनेलाई रु. एक लाख, द्वितीयलाई रु. ६० हजार तथा तृतीय हुनेलाई रु. ४० हजार राशिको पुरस्कारसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । कथा लेखनमा प्रदान गरिने यो पुरस्कार नेपालको सबैभन्दा ठूलो राशिको पुरस्कार हो ।
बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता २०७८ को प्रमुख निर्णायकको जिम्मेवारी समाल्न प्रख्यात आख्यानकार तथा साहित्यकारको श्री नारायण ढकालले स्वीकार गर्नु भएकोेछ । त्यस्तै निर्णायक समूहका अन्य दुई सदस्यमा स्थापित कथाकार श्री विवश पोखरेल तथा विख्यात समालोचक श्री कुमारी लामा रहनु भएको छ । निर्णायक समूहले आफूलाई प्राप्त कथामध्येबाट उत्कृष्ट २५ र तिनै कथामध्येबाट प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कथाको छनोट गर्नेछ । निर्णायक समूहलाई छनोटका क्रममा आवश्यक सबै निर्णय लिने पूर्ण स्वतन्त्रता रहनेछ ।
यस प्रतियोगितामा गतवर्ष सात सयभन्दा बढी कथाकारले भाग लिएका थिए भने यो वर्ष अझै ठूलो सहभागिता रहने हाम्रो विश्वास छ ।
उत्कृष्ट २५ मध्येमा पर्ने बाँकी २२ कथाकारलाई जनही पाँच हजार रुपैयाँ सम्मान स्वरुप प्रदान गरिनेछ । आन्तरिक निर्णायक मण्डलले छनोट गरेका ५० कथामध्ये २५ भित्र नपरेका बाँकी कथालाई बाह्रखरी डट कममा प्रकाशित गरिनेछ र कथाका।लाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनेछ ।
प्रतियोगितामा भाग लिन इच्छुक कथाकारले आफ्नो कथा २०७८ भदौ ३१ गतेभित्र ‘बाह्रखरी कथा’ को इमेल ठेगाना 12kharibooks@gmail.com वा books@baahrakhari.com मा पठाउनुु पर्नेछ ।
कथा प्रतियोगिताको नतिजा २०७८ मंसीर ३ गते शुक्रबार एक विशेष कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिनेछ । सोही दिन ‘उत्कृष्ट कथा–२०७८’ को लोकार्पणसमेत हुनेछ ।
विगतका वर्षहरूमा १२खरी कथा प्रतियोगितामा उत्कृष्ट कथाकारहरू पुरस्कृत भइसक्नु भएको छ । प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणमा बिना थिङ तामाङको ‘ब्याड भाले’ प्रथम भएको थियो । लक्ष्मण वियोगीको ‘टाउको’ द्वितीय र सुमित्रा न्यौपानेको ‘बार्दली’ कथा तृतीय भएको थियो । त्यस्तै दोस्रो संस्करणमा मुना चौधरीको ‘लार’ प्रथम भएको थियो भने श्रेयज सुवेदीको ‘बेजोडा’ द्वितीय र दीपेन्द्र दोङ तामाङको ‘बुलेट बाइक’ तृतीय भएको थियो ।
–अघिल्लो वर्षमा प्रतियोगिताका लागि प्राप्त कथा दोहो¥याएर पठाउन पाइनेछैन ।
–कथा अप्रकाशित र अप्रसारित हुनुपर्नेछ र प्रतियोगिताको नतिजा सार्वजनिक नहुन्जेल कतै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाइनेछैन ।
–प्रतियोगीले कथासँगै आफ्नो परिचय, सम्पर्क नम्बर र हालसालै खिचिएको फोटो अनिवार्य पठाउनुपर्नेछ ।
–प्रतियोगिताका लागि छानिएका कथाकारलाई ‘बाह्रखरी बुक्स’ले इमेल तथा फोनमार्फत् सम्पर्क गर्नेछ ।
–कथा पठाउनका लागिः
सम्पर्कः ०१-४१०६५१, ०१-४१०६५६, ९८०१८४९६२६
#बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता